यौन दुर्ब्यवहारको आरोप लागेपछि भारतीय संगीतकार अनु मलिकले इन्डियन आईडलको ‘जज’बाट दिए राजीनामा !! - Experience Best News from Nepal
यौन दुर्ब्यवहारको आरोप लागेपछि भारतीय संगीतकार अनु मलिकले इन्डियन आईडलको ‘जज’बाट दिए राजीनामा !!
भारतीय संगीतकार एवं गायक अनु मलिक पनि सामाजिक सञ्जालको अभियान ‘मि–टु’ को शिकार भएका छन् । यौन दुर्ब्यवहार गरेको विषय ‘मि–टु’ मार्फत सार्वजनिक भएपछि मलिकले लोकप्रिय कार्यक्रम इन्डियन आईडलको ‘जज’बाट राजिनामा दिएका हुन् ।
मलिकविरुद्ध सोना महापत्रा र स्वेता पण्डितले यौन दुर्ब्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए ।श्वेता पण्डित गायिका हुन् । श्वेताको आरोप छ, उनलाई नाबालिग उमेरमा अनु मलिकले यौन उत्पीडन गरे । श्वेता १५ बर्षको हुँदा नै राम्रो गीत गाउँथिन एक दिन जव अनु मलिकले उनको आवाज जाँच गर्न बोलाए तव उनले गीत सुनाउन लगाए र ‘आवारा पागल दीवाना’फिल्ममा शान र सुनिधीसँग गीत गाउने अवशर दिने तर त्यसको लागि आफ्नो गालामा चुम्बन गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
आफुले अंकल सम्बोधन गर्दै आएको स्थापीत ब्यक्तीको उक्त हर्कत आज सम्म कसैसामु नखोलेको तर जब ‘मि टु’ अभियानले बलिउड प्रवेश गर्‍यो, तब आफुले मुख खोलेको श्वेताको भनाई छ ।त्यसबेला अनु मलिकले काम दिने सर्तमा चुम्बन गर्न मागेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने च्यानल सोनीले मलिक इन्डियन आईडलको ‘जज’बाट राजिनामा दिएकाे जनाएको छ । यसअघि, यौन दुर्ब्यवहारको आरोप लागेपछि भारतका केन्द्रीय मन्त्री एमके अकबरले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, कैयौं कलाकार, पत्रकार, लेखक र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘मि–टु’मार्फत यौन दुर्ब्यवहारको आरोप लगाइएको छ ।
रेस-४ मा रहेनन् सलमान !! पुन सैफ रेसको सिक्वलमा फर्किदै
आमिर फ्लप पछि हिट कम्ब्याक गर्न गजनी-२ गर्दै